တပ်မတော် မရှိလျှင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ…? ( သို့ ) တပ်မတော် ရှိလျှက်နှင့် ဘာများဖြစ်ခဲ့ သနည်း..? – Na Pann San
တပ်မတော် ရှိလျှက်နှင့် ဘာများဖြစ်ခဲ့ သ နည်း…?
တပ်မတော် မရှိလျှင် ဘာဖြစ်သွား မလဲ ဟူသော အပြော အဆိုမျိုးက ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း တွင် ကျယ်လောင်စွာ ပြောဆိုခြင်းများ ကို ကြားလာခဲ့ ရသည်။ တပ်မတော်သာ အမိ တပ်မတော်သာ အဖ ဟုပင် ဆိုင်းဘုတ်များ နိုင်ငံ အနှံ့ စိုက်ထူ ခဲ့ကြသည်။
ဤသည် မှာ အိုးမလုံ အုံပွင့်နေကြသူများ ၏ ယခုတိုင် မရိုးနိုင်သေးသော ဓါတ်ပြား aဟာင်းကြီးပင် ဖြစ်သည်။ တကယ် တမ်းသာ ဓါတ်ပြားတချပ် ဖြစ်ခဲ့မည် ဆိုလျှင် တဂျစ်ဂျစ် နှင့်ပင် အသံမြည်နေ လောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည် တွင် မည်သူတစ်ဦးတယောက်ကမျှ တပ်မတော်ကို ဖျက်သိမ်းပေးပါ ဟု မတောင်းဆိုကြပေ။ သို့သော် တပ်မတော် မရှိရ ဟု ပြောဆိုနေသယောင် စကားလုံးများသည် လိမ်ညာ ဝါဒဖြန့်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ပြည်သူများ တောင်းဆိုနေကြ သည် မှာ ပြည်သူ့အကျိုး ကို ဦးထိပ်ထားသော တပ်မတော်၊ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက် အားထားရသော တပ်မတော် အဖြစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေးရေးကိုသာ တစိုက် မတ်မတ် တောင်းဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိပါလျှက် နှင့် မိမိတို့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် အတွက် လက်ကိုင်တုတ် အဖြစ် အသုံးချနေကြသူများ ကိုသာ ဝေဖန် ပြစ်တင် နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်သည် ဗိုလ်နေဝင်း၏ အာဏာရှင် စနစ်အောက် တွင် တိုင်းပြည်မှာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံ အဖြစ် ဗုန်းဗုန်းလဲကျ လာနေသည် ကို မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ကြသည်။ မည်သို့မျှ ဟန့်တား ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိေ ပ။
တပ်မတော် ရှိလျှက်နှင့် ဘာများဖြစ်ခဲ့ သနည်း..?
နိုင်ငံသည် ၁၉၈၈ မတိုင်မီ တွင် ပြည်ပ ကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံ ရှိနေသည် ။ နိုင်ငံခြား အရံငွေ သည် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ မှ ၃၅ သန်းအကြား သာ ရှိတော့ သည် ။ တိုင်းပြည် ဝင်ငွေ၏ တဝက်ခန့်ကို ပြည်ပကြွေးမြီများ အတွက် အတိုးပေးရန် သုံးစွဲနေရသည့် အနေအထား ဖြစ်လာသည်။ ကျန်သည့် ငွေများထဲမှ လက်နက်များ ဝယ်ယူကြရပြန်သည်။ နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဘာများ ကျန်ပေဦးတော့ မည်နည်း။ ပြည်တွင်းလည်ပတ်ငွေများကို ပုံနှိပ်စက်များဖြင့် လိုသလောက် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြရာမှ ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်ပြီး ငွေစက္ကူများ တရားမဝင် ရပ်ဆိုင်းသည် ဆိုကာ ပြည်သူတို့ ၏ ပင်ပန်းကြီးစွာ ရှာဖွေခဲ့ရေ သာ ချွေးနှဲစာများ ကို ၁၉၈၇ စက်တင်ဘာလ တွင် ပြန်လည် လုယူခဲ့ကြသည်။
ထိုအနေ အထား တွင် ငတ်တလှည့် ပြတ်တလှည့် ဖြစ်လာနေသော ပြည်သူများက တပ်မတော်ကြီး ရှိနေပါလျှက်နှင့် အားကိုး၍ မရမှန်း သိလာကြသည့်အခါ မိမိတို့ လူချင်းတူတူ သူချင်း မျှမျှ နေနိုင်ရေးအတွက် မိမိတို့ဖာသာ ရုန်းကန်တိုက်ပွဲ ဝင်မှ ဖြစ်တော့မည်ကို သဘောပေါက်လာခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့ အသက်ဆက် ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ကြံနေကြသော အချိ န်တွင် တခါက မိမိတို့ နိုင်ငံကို အားကျစိတ်ဖြင့် ကြိုးစားခဲ့သော ကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေး ဖြစ်သည့် စင်္ကာပူသည် ပထမဆုံး မြေအောက် အမြန် မီးရထားကို ၁၉၈၇ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ တွင် စတင်ပြေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ အဖြစ်အပျက်များမှာ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား တို့ သည် ၎င်းတို့၏ လည်မြိုကို နှစ်ပေါင်း ၂၆ နှစ်ကြာ တက်နင်းထားခဲ့သော စစ်ဖိနပ်အောက်မှ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားခဲ့မှုကြီး ၏ မှတ်တမ်းများပင် ဖြစ်တော့ သည် ။
မတ်လ ၁၂၊ ၁၉၈၈
ရန်ကုန် စက်မှု တက္ကသိုလ် အနီး လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် ကျောင်းသား များ နှင့် မြို့နယ် အာဏာပိုင် တို့၏ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်း လူကြီး သား များနှင့် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားလာ ခဲ့သည် ။ ကျောင်းသားများကို တုတ်ဓါးများနှင့် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြရာ ထိုသူများအားမည်သို့မျှ အရေးမယူခဲ့မှုအပေါ် မကျေနပ်သော ကျောင်းသားတို့၏ ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာမှ နောက်တနေ့တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် စက်မှု တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကိုဘုန်းမော် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကာ မကြာမီအတွင်းမှာပင် ကိုစိုးနိုင်ဆိုသူသည် သေနတ်ဒဏ်ရာနှင့် ဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ရသည်။
မတ်လ ၁၆ ၊ ၁၉၈၈
ထိုသို့ အကြမ်းဖက်နှိပ် ကွပ်မှုများကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲများသည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သို့ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ရာမှ အင်ယားကန်အနီး တံတားဖြူတွင် ကျောင်းသား များ ဒါဇင်နှင့် ချီ၍ အသတ်ခံခဲ့ကြရပြီး ရာပေါင်းများစွာ အဖမ်းခံခဲ့ကြ ရသည်။ တံတားဖြူ သည်လည်း တံတားနီ အဖြစ် ထင်ရှားလာပြီး၊ တက္ကသိုလ်နှင့် အခြေခံ ပညာကျောင်းများကို ပိတ်ပြစ်ခဲ့ကြသည်။ အဖမ်းခံရသော ကျောင်းသူ အချို့ မှာ ထောင်တွင်း တွင် အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရသည် ဟူသော စွပ်စွဲချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ကျောင်းများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ဆန္ဒပြပွဲ များ ဆယ်ရက်ခန့် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် နှင့် မိုးသီးဇွန်တို့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ် သည် ။
ဇူလိုင် ၂၃ ၊ ၁၉၈၈
ဦးနေဝင်းသည် မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် ပါတီ ဥက္ကဌ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ကြောင်းကို တိုင်းပြည်သို့ အသံလွှင့် ကြေငြာသွားခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများကို “တပ်မတော်” မှ ထိအောင် တည့်တည့်ပစ်ကာ နှိမ်နှင်းသွားမ ည်ဟု ပါ ထည့်သွင်း ကြိမ်းမောင်းသွား ခဲ့သည် ။ ထိုမိန့်ခွန်းထဲ မှာပင် ပါတီစုံ စနစ် ကျင့်သုံးရေး အတွက် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရန် အဆိုပြုလာခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၁၉၈၈
၁၉၆၂ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား အများအပြား သွေးမြေ ကျခဲ့မှု၏ လက်သည် တရားခံ ဖြစ်သော ဦးစိန်လွင် အား ပါတီဥက္ကဌ ရာထူးတွင် ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် လူထု၏ ဒေါသသည် အထွတ် အထိပ် သို့ ရောက်လာခဲ့ရပြီး အထွေထွေ သပိတ်တိုက် ပွဲကြီး ဆင်နွှဲရန် အရှိန်ရလာခဲ့သည်။
ဩဂုတ် ၃ ၊ ၁၉၈၈
လူငါးဦးထက် ပိုမစုရဟူေ သာ မာရှယ်လော အမိန့်ကို အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ဩဂုတ် ၆ ၊ ၁၉၈၈
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်မှ နှစ်ရက်အတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်း အထွေထွေ သပိတ်ကြီး စတင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဘီဘီစီသို့ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဩဂုတ် ၈ ၊ ၁၉၈၈
လူထု အင်အား သိန်း သန်း ချီသော အထွေထွေ သပိတ်တိုက်ပွဲကြီးသည် နိုင်ငံ အနှံ့ စတင်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုညမှာပင် “တပ်မတော်” မှ ရန်ကုန် မြို့တော် ခမ်းမရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသူများ ကို သေနတ် များဖြင့် ပစ်ခတ် နှိမ်နှင်းလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သပိတ်တိုက်ပွဲကြီးသည် နေ့စဉ်လို ဆက်တိုက် ဖြစ်လာနေသည်။
ဩဂုတ် ၁၀ ၊ ၁၉၈၈
“တပ်မတော်” မှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ထဲသို့ စတင် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်လာ၍ ဆရာဝန်များ၊သူနာပြုများ ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ကြရပြန်သည်။
ဩဂုတ် ၁၂၊ ၁၉၈၈
ဦးစိန်လွင်သည် မည် သည့် အကြောင်းပြချက်မှ မပေးပဲ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပါတီဥက္ကဌ အဖြစ် ၁၄ ရက်သာ ခံခဲ့သည်။
ဩဂုတ် ၁၉ ၊ ၁၉၈၈
အရပ်သား ပညာတတ် ဒေါက်တာ မောင်မောင် အား သမ္မတ အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည်။
ဩဂုတ် ၂၄ ၊ ၁၉၈၈
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် သွေးမြေကျခဲ့ရသော ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် လူထု အား ပထမဆုံးအကြိမ် မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဩဂုတ် ၂၆ ၊ ၁၉၈၈
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမ၏ သမိုင်းတွင်မည့် မိန့်ခွန်းကို ရွှေတိဂုံဘုရား အနောက်ဖက် မုဒ်တွင် တက်ရောက်လာသော ငါးသိန်းခန့် ရှိ လူထုကြီးအား မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၊ ၁၉၈၈
နိုင်ငံ အနှံ့ ဆန္ဒပြပွဲများ တနိုင်ငံလုံး တွင် အရှိန်အဟုန် နှင့် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလာနေပြီး စစ်ထောက်လှမ်းရေး မှလည်း တန်ပြန် သပိတ်ကို ဖြိုခွင်းရန် စတင် လှုပ်ရှားလာခဲ့သဖြင့် လုယက်မှု နှင့် အကြမ်းဖက်မှု များ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယား ပြိုကွဲသွားပြီ ဖြစ်သဖြင့် လူထုကြီးက တပ်မတော်အား ပြည်သူပြည်သားများဖက်မှ ရပ် တည်ပေး ပါရန် အပူတပြင်း တောင်းဆိုလာခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၁၉၈၈
တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး ကောင်စီ ဆို ကာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ဦးစီးသော စစ်ခေါင်းဆောင်များ က အာဏာ ကို လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရထံမှ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းရယူလိုက်သည်။ ယင်းသည် လွန်ခဲ့သော ၂၆ နှစ်က စတင်ခဲ့သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကို ပြန်လည် အားသစ်လောင်းလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ နာရီပိုင်း အတွင်းမှာပင် ဆန္ဒပြ ပြည်သူများကို ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ပြီး သပိတ်စခန်းများ ကို အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းလိုက်ကြသည်။ ထို့အတွက် ဩဂုတ် လမှ စက်တင်ဘာလ အတွင်း နိုင်ငံ၏ မြို့ကြီး ၆ မြို့တွင် ဆန္ဒပြ ပြည်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာ အသတ်ခံခဲ့ကြရသည်ဟု သံတမန်များ နှင့် ပြည်ပ စာနယ်ဇင်းများက အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ၊ ၁၉၈၈
စစ်ထောက်လှမ်းရေး မှ ရာဇဝင်ကြွေး ဆပ် သည့် အနေဖြင့် ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင် လူရာပေါင်းများစွာ ကို စတင် ဖမ်းဆီးလာခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများ၊ လူ ထောင်ပေါင်းများစွာမှာ နယ်စပ်ဒေသများ သို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ကြရသည်။ နယ်စပ်ဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် များနှင့် ပေါင်းစည်းကာ “တပ်မတော်” အား တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရန် စတင် လုံးပမ်းလာခဲ့ကြ သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၁၉၈၈
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး သမားများက နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံ တင်နိုင်ကြောင်း ဥပဒေ ပြဌာန်းလာခဲ့သည်။ ထို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် တာဝန်ယူကာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကို စတင်ဖွဲ့စည်းလာ ခဲ့သည်။
ဇွန် ၁၈ ၊ ၁၉၈၉
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က နိုင်ငံ၏ အမည်ကို Burma မှ Myanmar သို့ ၎င်းတို့သဘောတခုတည်း နှင့် ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
ဇူလိုင် ၂၀ ၊ ၁၉၈၉
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား အကျယ်ချုပ် ဖြင့် စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး အကျယ်ချုပ်ဘဝ ဖြင့် လွတ်လာလိုက်၊ ပြန်ဖမ်းဆီးလိုက်ဖြင့် သံသရာလည်လာခဲ့ ရသည် ။ သူမနှင့် အတူ NLD အဖွဲ့ဝင် အများ အပြား ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
မေ ၂၇၊ ၁၉၉၀
ရွေးကောက်ပွဲကို တနိုင်ငံလုံး တွင် ပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး NLD သည် အမတ်နေရာ ၈၀% ဖြင့် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။ သို့သော် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက ၎င်းတို့ ဦးဆောင် ကျင်းပ ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပြီး အာဏာကို နောက်ထပ် အနှစ်နှစ်ဆယ် ကြာသည့်အထိ ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၈-၂၆၊ ၂၀၀၇
တပ်မတော်သည် မိမိတို့ မရှိ လျှင် မဖြစ်ဟု ဆိုကာ လက်နက်အားကိုးဖြင့် ဗိုလ်ကျလာနေသည်ကို အားမရပဲ လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းကို ၆၆% အထိ တိုးမြှင့် လာပေရာ တထွာမျှသော ဝမ်းစာကိုပင် အလျှင် မီအောင် ရုန်းကန်ရင်း မသေရုံတမယ် အနိုင်နိုင် ရပ်တည် နေကြသော ပြည်သူများ နှင့် ရဟန်းသံဃာများ ပူးပေါင်း၍ နောင်တွင် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးဟု ထင်ရှား လာမည့် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရသည်။ ဆန္ဒပြသူ သံဃာတော်များ အပါအဝင် လူအများအပြား သေဆုံးသည့်အထိ တပ်မတော်၏ ရက်စက်စွာ နှိပ်ကွပ်မှု များ ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချခဲ့ကြပြီး အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် Panties for Peace ဟု ဆိုကာ မြန်မာသံရုံး အသီးသီးသို့ အမျိုးသမီး အတွင်းခံ အထုတ်များ ပေးပို့သည်အထိ ပါဝင်လာခဲ့သည်။
ဤသည်ကား စစ်ခေါင်းဆော င်များ အဖို့ အာဏာကို ဒီအတိုင်း ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထား၍ မဖြစ်တော့၊ အမြန်ဆုံး အရပ်ဖက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း၏ အဓိက တွန်းအားကြီးပင် ဖြစ်ပေတော့ သည်။
မေ ၁၀ ၊ ၂၀၀၈
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကြာပြီး နောက်တွင် လည်း အရေးပါသော တိုင်းပြည်အာဏာကို တပ်မတော်မှ တနည်းနည်း ဖြင့် ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရေး အတွက် တတိယမြောက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို နာဂစ်မုန် တိုင်းကျနေ သည့် အချိန်မှာပင် လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲ ဟုဆိုကာ အတည်ပြုခဲ့ပြန်သည်။
၁၉၉၀ – ၂၀၀၂
ထိုသို့ တိုင်းပြည်အာဏာကို နှစ်ပေါက်တပေါက်ဖြင့် အချင်းချင်း လက်ဝါး ရိုက်ကာ ဆက်လက် ရယူ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် နှစ်များ အတွင်း ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ်၏ စာရင်းဇယားများ အရ….
(၁) နိုင်ငံ၏ လူထု ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၁ နိုင်ငံတွင် အဆင့် ၁၉၀ ဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
(၂) ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်သည် လူတဦးလျှင် ပျမ်းမျှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာသာ ရှိပြီး ကျန် အာဆီယံ နိုင်ငံများသည် ပျမ်းမျှ ၁၃၇ ဒေါ်လာ သုံးစွဲခဲ့သည်။
(၃) ငါးနှစ်အောက် ကလေး သေဆုံးနှုန်းသည် ၁၀၀၀ လျှင် ၁၀၉ ဦး ရှိခဲ့သည်။
(၄) လူတဦးချင်းစီ၏ ပျမ်းမျှ သက်တမ်းသည် ကျား – ၅၆.၂ နှစ်၊ မ – ၆၁.၈ နှစ် ဖြစ်သည်။ ကျား/မ ပေါင်း ဆိုက ပျမ်းမျှ ၅၈.၉ နှစ် ဖြစ်ပြီး အာဆီယံ၏ ပျမ်းမျှ သက်တမ်း ၆၆.၉ နှစ်ထက် ၈ နှစ်ခန့် နိမ့်ဆင်းလျှက် ရှိသည်။
(၅) အသက် ၅ နှစ်အောက် အစာအဟာရ ချို့တဲ့သော ကလေးများသည် စုစုပေါင်း၏ ၃၆% ရှိသည်။
ဤသည်က တပ်မတော် စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး များ စီမံအုပ်ချုပ်ပေး ခဲ့သည့် ရလဒ် များပင် ဖြစ်ပေတော့ သည်…။ Hla Soewai
တပျမတျော ရှိလြှကျနှငျ့ ဘာမြားဖွဈခဲ့ သ နညျး…?
တပျမတျော မရှိလြှငျ ဘာဖွဈသှား မလဲ ဟူသော အပွော အဆိုမြိုးက ၁၉၈၈ နောကျပိုငျး တှငျ ကယျြလောငျစှာ ပွောဆိုခွငျးမြား ကို ကွားလာခဲ့ ရသညျ။ တပျမတျောသာ အမိ တပျမတျောသာ အဖ ဟုပငျ ဆိုငျးဘုတျမြား နိုငျငံ အနှံ့ စိုကျထူ ခဲ့ကွသညျ။
ဤသညျ မှာ အိုးမလုံ အုံပှငျ့နကွေသူမြား ၏ ယခုတိုငျ မရိုးနိုငျသေးသော ဓါတျပွား aဟာငျးကွီးပငျ ဖွဈသညျ။ တကယျ တမျးသာ ဓါတျပွားတခပျြ ဖွဈခဲ့မညျ ဆိုလြှငျ တဂဈြဂဈြ နှငျ့ပငျ အသံမွညျနေ လောကျပွီ ဖွဈသညျ။
မွနျမာပွညျ တှငျ မညျသူတဈဦးတယောကျကမြှ တပျမတျောကို ဖကျြသိမျးပေးပါ ဟု မတောငျးဆိုကွပေ။ သို့သျော တပျမတျော မရှိရ ဟု ပွောဆိုနသေယောငျ စကားလုံးမြားသညျ လိမျညာ ဝါဒဖွနျ့နကွေခွငျးသာ ဖွဈသညျ။
ပွညျသူမြား တောငျးဆိုနကွေ သညျ မှာ ပွညျသူ့အကြိုး ကို ဦးထိပျထားသော တပျမတျော၊ နိုငျငံတျော ကာကှယျရေး အတှကျ အားထားရသော တပျမတျော အဖွဈ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲပေးရေးကိုသာ တစိုကျ မတျမတျ တောငျးဆိုနကွေခွငျး ဖွဈသညျ။ ထိုသို့ ပွုပွငျပွောငျးလဲရနျ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ ရှိပါလြှကျ နှငျ့ မိမိတို့ အကြိုးစီးပှားကို ကာကှယျရနျ အတှကျ လကျကိုငျတုတျ အဖွဈ အသုံးခနြကွေသူမြား ကိုသာ ဝဖေနျ ပွဈတငျ နကွေခွငျး ဖွဈသညျ။
တပျမတျောသညျ ဗိုလျနဝေငျး၏ အာဏာရှငျ စနဈအောကျ တှငျ တိုငျးပွညျမှာ အဆငျးရဲဆုံး နိုငျငံ အဖွဈ ဗုနျးဗုနျးလဲကြ လာနသေညျ ကို မိနျ့မိနျ့ကွီး ထိုငျကွညျ့နခေဲ့ကွသညျ။ မညျသို့မြှ ဟနျ့တား ပွောဆိုခဲ့ခွငျး မရှိေ ပ။
တပျမတျော ရှိလြှကျနှငျ့ ဘာမြားဖွဈခဲ့ သနညျး..?
နိုငျငံသညျ ၁၉၈၈ မတိုငျမီ တှငျ ပွညျပ ကွှေးမွီ ဒျေါလာ ၃.၅ ဘီလီယံ ရှိနသေညျ ။ နိုငျငံခွား အရံငှေ သညျ ဒျေါလာ သနျး ၂၀ မှ ၃၅ သနျးအကွား သာ ရှိတော့ သညျ ။ တိုငျးပွညျ ဝငျငှေ၏ တဝကျခနျ့ကို ပွညျပကွှေးမွီမြား အတှကျ အတိုးပေးရနျ သုံးစှဲနရေသညျ့ အနအေထား ဖွဈလာသညျ။ ကနျြသညျ့ ငှမြေားထဲမှ လကျနကျမြား ဝယျယူကွရပွနျသညျ။ နိုငျငံ ဖှံ့ဖွိုးရေး အတှကျ ဘာမြား ကနျြပဦေးတော့ မညျနညျး။ ပွညျတှငျးလညျပတျငှမြေားကို ပုံနှိပျစကျမြားဖွငျ့ လိုသလောကျ ရိုကျနှိပျထုတျဝခေဲ့ကွရာမှ ကိုယျ့ရှူးကိုယျပတျပွီး ငှစေက်ကူမြား တရားမဝငျ ရပျဆိုငျးသညျ ဆိုကာ ပွညျသူတို့၏ ပငျပနျးကွီးစှာ ရှာဖှခေဲ့ရေ သာ ခြှေးနှဲစာမြား ကို ၁၉၈၇ စကျတငျဘာလ တှငျ ပွနျလညျ လုယူခဲ့ကွသညျ။
ထိုအနေ အထား တှငျ ငတျတလှညျ့ ပွတျတလှညျ့ ဖွဈလာနသေော ပွညျသူမြားက တပျမတျောကွီး ရှိနပေါလြှကျနှငျ့ အားကိုး၍ မရမှနျး သိလာကွသညျ့အခါ မိမိတို့ လူခငျြးတူတူ သူခငျြး မြှမြှ နနေိုငျရေးအတှကျ မိမိတို့ဖာသာ ရုနျးကနျတိုကျပှဲ ဝငျမှ ဖွဈတော့မညျကို သဘောပေါကျလာခဲ့ကွသညျ။ မိမိတို့ အသကျဆကျ ရပျတညျနိုငျရေး အတှကျ တိုကျပှဲဝငျရနျ ကွံနကွေသော အခြိ နျတှငျ တခါက မိမိတို့ နိုငျငံကို အားကစြိတျဖွငျ့ ကွိုးစားခဲ့သော ကြှနျးနိုငျငံငယျလေး ဖွဈသညျ့ စင်ျကာပူသညျ ပထမဆုံး မွအေောကျ အမွနျ မီးရထားကို ၁၉၈၇ နိုဝငျဘာ ၇ ရကျနေ့ တှငျ စတငျပွေးဆှဲနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။
အောကျပါ အဖွဈအပကျြမြားမှာ မွနျမာ တိုငျးရငျးသား တို့ သညျ ၎င်းငျးတို့၏ လညျမွိုကို နှဈပေါငျး ၂၆ နှဈကွာ တကျနငျးထားခဲ့သော စဈဖိနပျအောကျမှ ရုနျးကနျ လှုပျရှားခဲ့မှုကွီး ၏ မှတျတမျးမြားပငျ ဖွဈတော့ သညျ ။
မတျလ ၁၂၊ ၁၉၈၈
ရနျကုနျ စကျမှု တက်ကသိုလျ အနီး လ်ဘကျရညျဆိုငျတှငျ ကြောငျးသား မြား နှငျ့ မွို့နယျ အာဏာပိုငျ တို့၏ ပတျသကျရာ ပတျသကျကွောငျး လူကွီး သား မြားနှငျ့ ခိုကျရနျ ဖွဈပှားလာ ခဲ့သညျ ။ ကြောငျးသားမြားကို တုတျဓါးမြားနှငျ့ ရိုကျနှကျခဲ့ကွရာ ထိုသူမြားအားမညျသို့မြှ အရေးမယူခဲ့မှုအပျေါ မကနြေပျသော ကြောငျးသားတို့၏ ဆန်ဒပွပှဲမြား ဖွဈပျေါလာခဲ့ရာမှ နောကျတနတှေ့ငျ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြား ၏ ပဈခတျမှုကွောငျ့ စကျမှု တက်ကသိုလျ ကြောငျးသား ကိုဘုနျးမျော ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးကာ မကွာမီအတှငျးမှာပငျ ကိုစိုးနိုငျဆိုသူသညျ သနေတျဒဏျရာနှငျ့ ဆေးရုံကွီးတှငျ ကှယျလှနျ သှားခဲ့ရသညျ။
မတျလ ၁၆ ၊ ၁၉၈၈
ထိုသို့ အကွမျးဖကျနှိပျ ကှပျမှုမြားကွောငျ့ ဆန်ဒပွပှဲမြားသညျ ရနျကုနျ တက်ကသိုလျ သို့ ပြံ့နှံ့လာခဲ့ရာမှ အငျယားကနျအနီး တံတားဖွူတှငျ ကြောငျးသား မြား ဒါဇငျနှငျ့ ခြီ၍ အသတျခံခဲ့ကွရပွီး ရာပေါငျးမြားစှာ အဖမျးခံခဲ့ကွ ရသညျ။ တံတားဖွူ သညျလညျး တံတားနီ အဖွဈ ထငျရှားလာပွီး၊ တက်ကသိုလျနှငျ့ အခွခေံ ပညာကြောငျးမြားကို ပိတျပွဈခဲ့ကွသညျ။ အဖမျးခံရသော ကြောငျးသူ အခြို့ မှာ ထောငျတှငျး တှငျ အဓမ်မပွုကငျြ့ခံခဲ့ရသညျ ဟူသော စှပျစှဲခကျြမြား ထှကျပျေါလာခဲ့သညျ။
ကြောငျးမြား ပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈပွီးနောကျ ဆန်ဒပွပှဲ မြား ဆယျရကျခနျ့ ဆကျလကျ ဖွဈပှားခဲ့ပွနျသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ကြောငျးသား ခေါငျးဆောငျ မငျးကိုနိုငျ နှငျ့ မိုးသီးဇှနျတို့ ထှကျပျေါလာခဲ့ပွီ ဖွဈ သညျ ။
ဇူလိုငျ ၂၃ ၊ ၁၉၈၈
ဦးနဝေငျးသညျ မွနျမာ့ ဆိုရှယျလဈ ပါတီ ဥက်ကဌ ရာထူးမှ နှုတျထှကျကွောငျးကို တိုငျးပွညျသို့ အသံလှငျ့ ကွငွောသှားခဲ့ပွီး ဆန်ဒပွသူမြားကို “တပျမတျော” မှ ထိအောငျ တညျ့တညျ့ပဈကာ နှိမျနှငျးသှားမ ညျဟု ပါ ထညျ့သှငျး ကွိမျးမောငျးသှား ခဲ့သညျ ။ ထိုမိနျ့ခှနျးထဲ မှာပငျ ပါတီစုံ စနဈ ကငျြ့သုံးရေး အတှကျ လူထုဆန်ဒခံယူပှဲ ကငျြးပရနျ အဆိုပွုလာခဲ့သညျ။
ဇူလိုငျ ၂၉ ၊ ၁၉၈၈
၁၉၆၂ ရနျကုနျ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသား အမြားအပွား သှေးမွေ ကခြဲ့မှု၏ လကျသညျ တရားခံ ဖွဈသော ဦးစိနျလှငျ အား ပါတီဥက်ကဌ ရာထူးတှငျ ခနျ့အပျလိုကျခွငျးဖွငျ့ လူထု၏ ဒေါသသညျ အထှတျ အထိပျ သို့ ရောကျလာခဲ့ရပွီး အထှထှေေ သပိတျတိုကျ ပှဲကွီး ဆငျနှဲရနျ အရှိနျရလာခဲ့သညျ။
ဩဂုတျ ၃ ၊ ၁၉၈၈
လူငါးဦးထကျ ပိုမစုရဟူေ သာ မာရှယျလော အမိနျ့ကို အစိုးရမှ ထုတျပွနျလိုကျသညျ။
ဩဂုတျ ၆ ၊ ၁၉၈၈
ကြောငျးသား ခေါငျးဆောငျ ကိုဌေးကွှယျမှ နှဈရကျအတှငျး နိုငျငံတဝှမျး အထှထှေေ သပိတျကွီး စတငျတော့မညျ ဖွဈကွောငျး ဘီဘီစီသို့ ထုတျဖျေါ ပွောဆိုခဲ့သညျ။
ဩဂုတျ ၈ ၊ ၁၉၈၈
လူထု အငျအား သိနျး သနျး ခြီသော အထှထှေေ သပိတျတိုကျပှဲကွီးသညျ နိုငျငံ အနှံ့ စတငျလာခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။ ထိုညမှာပငျ “တပျမတျော” မှ ရနျကုနျ မွို့တျော ခမျးမရှတှေ့ငျ ဆန်ဒပွသူမြား ကို သနေတျ မြားဖွငျ့ ပဈခတျ နှိမျနှငျးလာခဲ့သညျ။ ထိုအခြိနျမှစ၍ သပိတျတိုကျပှဲကွီးသညျ နစေ့ဉျလို ဆကျတိုကျ ဖွဈလာနသေညျ။
ဩဂုတျ ၁၀ ၊ ၁၉၈၈
“တပျမတျော” မှ ရနျကုနျဆေးရုံကွီး ထဲသို့ စတငျ ပဈခတျ တိုကျခိုကျလာ၍ ဆရာဝနျမြား၊သူနာပွုမြား ထိမှနျသဆေုံးခဲ့ကွရပွနျသညျ။
ဩဂုတျ ၁၂၊ ၁၉၈၈
ဦးစိနျလှငျသညျ မညျ သညျ့ အကွောငျးပွခကျြမှ မပေးပဲ ရာထူးမှ နှုတျထှကျသှားခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးသညျ ပါတီဥက်ကဌ အဖွဈ ၁၄ ရကျသာ ခံခဲ့သညျ။
ဩဂုတျ ၁၉ ၊ ၁၉၈၈
အရပျသား ပညာတတျ ဒေါကျတာ မောငျမောငျ အား သမ်မတ အဖွဈ ခနျ့အပျလိုကျသညျ။
ဩဂုတျ ၂၄ ၊ ၁၉၈၈
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ သှေးမွကေခြဲ့ရသော ရနျကုနျဆေးရုံကွီးတှငျ လူထု အား ပထမဆုံးအကွိမျ မိနျ့ခှနျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
ဩဂုတျ ၂၆ ၊ ၁၉၈၈
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ သူမ၏ သမိုငျးတှငျမညျ့ မိနျ့ခှနျးကို ရှတေိဂုံဘုရား အနောကျဖကျ မုဒျတှငျ တကျရောကျလာသော ငါးသိနျးခနျ့ ရှိ လူထုကွီးအား မိနျ့ခှနျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
စကျတငျဘာ ၊ ၁၉၈၈
နိုငျငံ အနှံ့ ဆန်ဒပွပှဲမြား တနိုငျငံလုံး တှငျ အရှိနျအဟုနျ နှငျ့ ဆကျလကျ ဖွဈပှားလာနပွေီး စဈထောကျလှမျးရေး မှလညျး တနျပွနျ သပိတျကို ဖွိုခှငျးရနျ စတငျ လှုပျရှားလာခဲ့သဖွငျ့ လုယကျမှု နှငျ့ အကွမျးဖကျမှု မြား စတငျပျေါပေါကျလာခဲ့ရပွီ ဖွဈသညျ။ အစိုးရ အုပျခြုပျရေး ယန်တယား ပွိုကှဲသှားပွီ ဖွဈသဖွငျ့ လူထုကွီးက တပျမတျောအား ပွညျသူပွညျသားမြားဖကျမှ ရပျ တညျပေး ပါရနျ အပူတပွငျး တောငျးဆိုလာခဲ့ကွသညျ။
စကျတငျဘာ ၁၈၊ ၁၉၈၈
တပျမတျောမှ နိုငျငံတျော ငွိမျဝပျပိပွားရေး ကောငျစီ ဆို ကာ ဗိုလျခြုပျကွီး စောမောငျ ဦးစီးသော စဈခေါငျးဆောငျမြား က အာဏာ ကို လမျးစဉျပါတီ အစိုးရထံမှ စနဈတကြ လှဲပွောငျးရယူလိုကျသညျ။ ယငျးသညျ လှနျခဲ့သော ၂၆ နှဈက စတငျခဲ့သော စဈအုပျခြုပျရေး ကို ပွနျလညျ အားသဈလောငျးလိုကျခွငျးသာ ဖွဈသညျ။ နာရီပိုငျး အတှငျးမှာပငျ ဆန်ဒပွ ပွညျသူမြားကို ပဈခတျ တိုကျခိုကျပွီး သပိတျစခနျးမြား ကို အငျအားသုံး ဖွိုခှငျးလိုကျကွသညျ။ ထို့အတှကျ ဩဂုတျ လမှ စကျတငျဘာလ အတှငျး နိုငျငံ၏ မွို့ကွီး ၆ မွို့တှငျ ဆန်ဒပွ ပွညျသူ ထောငျပေါငျးမြားစှာ အသတျခံခဲ့ကွရသညျဟု သံတမနျမြား နှငျ့ ပွညျပ စာနယျဇငျးမြားက အတညျပွုခဲ့ကွသညျ။
စကျတငျဘာ ၂၁ ၊ ၁၉၈၈
စဈထောကျလှမျးရေး မှ ရာဇဝငျကွှေး ဆပျ သညျ့ အနဖွေငျ့ ဆန်ဒပွ ခေါငျးဆောငျမြားအပါအဝငျ လူရာပေါငျးမြားစှာ ကို စတငျ ဖမျးဆီးလာခဲ့သညျ။ ကြောငျးသားမြား၊ လူ ထောငျပေါငျးမြားစှာမှာ နယျစပျဒသေမြား သို့ ထှကျပွေးခိုလှုံခဲ့ကွရသညျ။ နယျစပျဒသေမြားရှိ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ မြားနှငျ့ ပေါငျးစညျးကာ “တပျမတျော” အား တျောလှနျတိုကျခိုကျရနျ စတငျ လုံးပမျးလာခဲ့ကွ သညျ။
စကျတငျဘာ ၂၇၊ ၁၉၈၈
စဈအုပျခြုပျရေး သမားမြားက နိုငျငံရေး ပါတီမြား မှတျပုံ တငျနိုငျကွောငျး ဥပဒေ ပွဌာနျးလာခဲ့သညျ။ ထို့အတှကျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမှ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး အဖွဈ တာဝနျယူကာ အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ ကို စတငျဖှဲ့စညျးလာ ခဲ့သညျ။
ဇှနျ ၁၈ ၊ ၁၉၈၉
စဈအုပျခြုပျရေး အဖှဲ့က နိုငျငံ၏ အမညျကို Burma မှ Myanmar သို့ ၎င်းငျးတို့သဘောတခုတညျး နှငျ့ ပွောငျးလဲခဲ့ကွသညျ။
ဇူလိုငျ ၂၀ ၊ ၁၉၈၉
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အား အကယျြခြုပျ ဖွငျ့ စတငျဖမျးဆီးခဲ့သညျ။ ထိုအခြိနျမှစ၍ နှဈပေါငျး ၂၀ လုံးလုံး အကယျြခြုပျဘဝ ဖွငျ့ လှတျလာလိုကျ၊ ပွနျဖမျးဆီးလိုကျဖွငျ့ သံသရာလညျလာခဲ့ ရသညျ ။ သူမနှငျ့ အတူ NLD အဖှဲ့ဝငျ အမြား အပွား ဖမျးဆီးခံခဲ့ရသညျ။
မေ ၂၇၊ ၁၉၉၀
ရှေးကောကျပှဲကို တနိုငျငံလုံး တှငျ ပွုလုပျလာခဲ့ပွီး NLD သညျ အမတျနရော ၈၀% ဖွငျ့ အပွတျအသတျ အနိုငျရရှိသှားခဲ့သညျ။ သို့သျော တပျမတျော ခေါငျးဆောငျမြားက ၎င်းငျးတို့ ဦးဆောငျ ကငျြးပ ခဲ့သော ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျ ကို ၎င်းငျးတို့ကိုယျတိုငျ အသိအမှတျပွုရနျ ငွငျးဆနျခဲ့ကွပွီး အာဏာကို နောကျထပျ အနှဈနှဈဆယျ ကွာသညျ့အထိ ဆကျလကျ ဆုပျကိုငျထားခဲ့ကွသညျ။
စကျတငျဘာ ၁၈-၂၆၊ ၂၀၀၇
တပျမတျောသညျ မိမိတို့ မရှိ လြှငျ မဖွဈဟု ဆိုကာ လကျနကျအားကိုးဖွငျ့ ဗိုလျကလြာနသေညျကို အားမရပဲ လောငျစာဆီ ဈေးနှုနျးကို ၆၆% အထိ တိုးမွှငျ့ လာပရော တထှာမြှသော ဝမျးစာကိုပငျ အလြှငျ မီအောငျ ရုနျးကနျရငျး မသရေုံတမယျ အနိုငျနိုငျ ရပျတညျ နကွေသော ပွညျသူမြား နှငျ့ ရဟနျးသံဃာမြား ပူးပေါငျး၍ နောငျတှငျ ရှဝေါရောငျ တျောလှနျရေးဟု ထငျရှား လာမညျ့ ကနျ့ကှကျ ဆန်ဒပွပှဲမြား ဖွဈပျေါလာခဲ့ရသညျ။ ဆန်ဒပွသူ သံဃာတျောမြား အပါအဝငျ လူအမြားအပွား သဆေုံးသညျ့အထိ တပျမတျော၏ ရကျစကျစှာ နှိပျကှပျမှု မြား ကို ကမ်ဘာတဝှမျးမှ ပွငျးထနျစှာ ကနျ့ကှကျ ရှုတျခခြဲ့ကွပွီး အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျတှငျ Panties for Peace ဟု ဆိုကာ မွနျမာသံရုံး အသီးသီးသို့ အမြိုးသမီး အတှငျးခံ အထုတျမြား ပေးပို့သညျအထိ ပါဝငျလာခဲ့သညျ။
ဤသညျကား စဈခေါငျးဆော ငျမြား အဖို့ အာဏာကို ဒီအတိုငျး ဆကျလကျ ဆုပျကိုငျထား၍ မဖွဈတော့၊ အမွနျဆုံး အရပျဖကျသို့ လှဲပွောငျးပေးရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ခွငျး၏ အဓိက တှနျးအားကွီးပငျ ဖွဈပတေော့ သညျ။
မေ ၁၀ ၊ ၂၀၀၈
နှဈပေါငျး နှဈဆယျကွာပွီး နောကျတှငျ လညျး အရေးပါသော တိုငျးပွညျအာဏာကို တပျမတျောမှ တနညျးနညျး ဖွငျ့ ဆကျလကျ ဆုပျကိုငျထားနိုငျရေး အတှကျ တတိယမွောကျ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံ ဥပဒကေို နာဂဈမုနျ တိုငျးကနြေ သညျ့ အခြိနျမှာပငျ လူထု ဆန်ဒခံယူပှဲ ဟုဆိုကာ အတညျပွုခဲ့ပွနျသညျ။
ထိုသို့ တိုငျးပွညျအာဏာကို နှဈပေါကျတပေါကျဖွငျ့ အခငျြးခငျြး လကျဝါး ရိုကျကာ ဆကျလကျ ရယူ အုပျခြုပျခဲ့သညျ့ နှဈမြား အတှငျး ကမ်ဘာကနျြးမာရေး အဖှဲ့ခြုပျ၏ စာရငျးဇယားမြား အရ….
(၁) နိုငျငံ၏ လူထု ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုသညျ နိုငျငံပေါငျး ၁၉၁ နိုငျငံတှငျ အဆငျ့ ၁၉၀ ဖွငျ့ ရပျတညျခဲ့သညျ။
(၂) ကနျြးမာရေး အသုံးစရိတျသညျ လူတဦးလြှငျ ပမျြးမြှ အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၅ ဒျေါလာသာ ရှိပွီး ကနျြ အာဆီယံ နိုငျငံမြားသညျ ပမျြးမြှ ၁၃၇ ဒျေါလာ သုံးစှဲခဲ့သညျ။
(၃) ငါးနှဈအောကျ ကလေး သဆေုံးနှုနျးသညျ ၁၀၀၀ လြှငျ ၁၀၉ ဦး ရှိခဲ့သညျ။
(၄) လူတဦးခငျြးစီ၏ ပမျြးမြှ သကျတမျးသညျ ကြား – ၅၆.၂ နှဈ၊ မ – ၆၁.၈ နှဈ ဖွဈသညျ။ ကြား/မ ပေါငျး ဆိုက ပမျြးမြှ ၅၈.၉ နှဈ ဖွဈပွီး အာဆီယံ၏ ပမျြးမြှ သကျတမျး ၆၆.၉ နှဈထကျ ၈ နှဈခနျ့ နိမျ့ဆငျးလြှကျ ရှိသညျ။
(၅) အသကျ ၅ နှဈအောကျ အစာအဟာရ ခြို့တဲ့သော ကလေးမြားသညျ စုစုပေါငျး၏ ၃၆% ရှိသညျ။
ဤသညျက တပျမတျော စဈခေါငျးဆောငျကွီး မြား စီမံအုပျခြုပျပေး ခဲ့သညျ့ ရလဒျ မြားပငျ ဖွဈပတေော့ သညျ…။ Hla Soewai
ဗေဒင်မမေး ယတြာမချေရဘဲ စီးပွားတက်ပြီး သူဌေးကြီးဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အခြေခံအချက်တွေ…